प्रचण्ड रेनुको रुन्चे अनुहार, चितवनमा एमालेले लियो अग्रता, गठबन्धनलाई पछि पार्यो !! - Compaq News
प्रचण्ड रेनुको रुन्चे अनुहार, चितवनमा एमालेले लियो अग्रता, गठबन्धनलाई पछि पार्यो !!
चितवन । माडी नगरपालिका २ सय मत गन्दा ५ दलिय गठबन्धनको नतिजा एमालेको भन्दा पछि परेको छ ।
माडी वडा नं.१ को मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार ५ दलिय गठबन्धन मेयरमा माओबादी केन्द्र ऋषि काफ्ले ८१ र एमालेकि ताराकाजी महत्तोले ८२ मत प्राप्त गरेकि छन ।
त्यस्तै उपप्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसका खेम महत्तोको ८० , कृष्ण पौडेलले ३८ र राप्रपाका मदन पौडेलको १८ मत प्राप्त गरेका छन । त्यस्तै वडा नं.१ को अध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसका जिवन महत्तोले ८९ र रा.प्र.पाका अमित लामाले ७५ मत प्राप्त गरेका छन ।
९ पालिकामा कांग्रेस अगाडी, एमाले पछ्याउदै
काठमाडौं । स्थानीय तह चुनावको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ । मत परिणाम आइरहेका १३ स्थानीय तहमध्ये ९ वटा स्थानीय तहमा कांग्रेसले अग्रता लिएको छ भने ४ वटामा एमालेको अग्रता छ ।
गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा ११ सय ७२ मतका साथ कांग्रेका खिलध्वज पन्थीले अग्रता लिँदा एमालेका राजेन्द्र पाण्डेले ९२२ मत पाएका छन् । नुवाकोटको विदुर नगरपालिका कांग्रेसका राजन श्रेष्ठले झिनो मतले अग्रता लिएका छन् भने नुवाकोटको म्यागङमा कांग्रेसकी आसा तामाङले ९३ मतकासाथ अग्रता लिएका छन् भने तार्केश्वरमा शिवअधिकारीले अग्रता कायम गरेका छन् ।
मध्यपुर थिमीमा कांग्रेसका सुन्दर श्रेष्ठले २१७ मत लिएर अग्रता कायम गर्दा लोमाङथाङमा टसि गुरूङले २०२ मत लिएर अग्रता कायम गरेका छन् । त्यस्तै गंगालेव गाउँपालिकामा हरीबहादुर पुन, गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा सरोजकुमार थापा र दुँहुँ गाउँपालिका दार्चुलामा पुलेन्द्रबहादुर कार्कीले सुरूवाती अग्रता कायम गरेका छन् ।
एमालेले घरपझोङ गाउँपालिका, लो(घोकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका, नाशोङ गाउँपालिका र मनाङ डिसेङ गाउँपालिकामा सुरूवातदेखिको अग्रता कायम गरेको छ ।